“ढुङ्गा र माटाको घर भत्किएला, मन भत्काउनु हुन्न !” - Hamrokhotang
Home » News » “ढुङ्गा र माटाको घर भत्किएला, मन भत्काउनु हुन्न !”
“ढुङ्गा र माटाको घर भत्किएला, मन भत्काउनु हुन्न !”
बैशाख–२३, गला अलि अवरुद्ध भएजस्तो गरि टेलीफोन सम्पर्कमा भन्दैहुनुहुन्थ्यो, “घरमा त बिरामी आमा र बुबा मात्र हुनुहुन्छ । शनिबारको बिनाशकारी भूकम्पले बस्नै नहुनेगरि घर चर्किएपछि बिचल्ली हुनुभएको छ ।”
जिल्लामा पत्रकारिता गर्दागर्दै आमा र बुबाको उपचार खर्च जुटाउन डेढ वर्षअघि मलेसिया पुग्नुभएका खोटाङ नुनथला–८ का चिसाङ शेर्पाको मनमा महाभूकम्पको नराम्ररी धक्का लागेको छ । मलेसियामा रहँदा आफ्नो भर्खरै बनाएको घर भूकम्पले चर्किएको खबरले भन्दा पनि विपत्तीको समयमा बुबाआमा र आफन्तको साथमा रहन नपाउँदाको पीडाले शेर्पाको मन चर्किएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “फेसबुक लगायत अनलाईनहरुमा नेपालमा बिनाशकारी भूकम्प गएको खबर आयो, मलाई मेरो बुबाआमा, घरपरिवार र साथीभाइको मात्र हैन प्यारो नेपाल र सारा नेपालीको यादले ज्यादै सतायो ।”
मलेसियाबाटै जिल्लामा आर्थिक सहयोग गरिरहेका शेर्पालाई शनिबारको महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको खबर सुन्ना साथ नेपाल दगुरौं झै लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घर जाँउ भनेर के गर्नु ! कम्पनी र करारअवधिमा हस्ताक्षर गरेअनुरुप त्यो सम्भव थिएनँ, सम्झेर ल्याउँदा गला रुझेर आउँछ !” मिजासिला स्वभावका शेर्पाले थप्नुभयो, “तपाईंले जिज्ञासा राख्नु’भो मैले पो भन्ने ठाउँ पाएँ, अनि राख्दैछु, अन्य म भन्दा पीडित प्रवासी नेपाली कति छन् कति ! त्यसैले सबैले धैर्य र सम्यमता अपनाउनुपर्छ यस्तो घडीमा ।”
साहित्यमा समेत चासो राख्नुहुने शेर्पा नुनथला–८ का ४८ वर्षीय दोर्जे शेर्पा र ५६ वर्षीया चन्द्रमायाँ शेर्पाको माइला छोरा हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो ढुङ्गा र माटाको घर भत्किएला बनाउँने कोशिष गरुम्ला ! तर, मनको घर भत्काउनु हुन्न !”
मलेसियामा गएपछि आर्थिक कारोबारमा सहज भएको बताउनुहुने शेर्पा अब नेपाल फर्केर फेरि पत्रकारिता नै गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चार भाइमध्ये तीन भाइ मलेसियामा छौं, कान्छा भाइ खोटाङकै हलेसी गुम्बामा पढ्दैछ । अब केही महिनापछि नेपाल पर्किएर पुनः पत्रकारिता नै गर्ने बिचारमा छु ।”
यता, नुनथलाबाट उहाँका ५४ वर्षीय बुबा दोर्जे शेर्पा र ५६ वर्षीया आमा चन्द्रमायाँ शेर्पाले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना छोराहरुलाई सम्झनुभयो । भर्खरै बनाएको आफ्नो घर चर्किएपछि बिचल्लीमा पर्नुभएका शेर्पा दम्पत्ती भन्छन्, “घरभन्दा त ज्यान प्यारो हुन्छ । घर भत्किएर के भो र ! केटाहरु तीन भाइ विदेशमा छन् । हामी पनि मरेका छैनौं, फेरि बनाउँला नी अर्को घर !”
शनिबारको महाभूकम्पले जिल्लाका एक हजार आठ सय ८४ घर पूर्णरुपमा भत्किएका छन् । उनीहरुका लागि राहत सामाग्री बितरण टोली खटाइएपनि पाल, गुन्द्री, बाल्टी, कम्मल लगायतका सामाग्री अपुग भएको छ ।